XOG: RW CC oo Siriq u dhigay Xasan sheekh, khilaaf Cusub & Sheekh Shariif oo fursad helay… | Kismaayo24 News Agency
XOG: RW CC oo Siriq u dhigay Xasan sheekh, khilaaf Cusub & Sheekh Shariif oo fursad helay…
Wednesday September 28, 2016 - 12:45 under Somali News by Tifaftiraha K24
Xasan Shiikh M/weynaha Waqtigiisa dhamaaday iyo Cumar Cabdirashiid ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf sayaasadeed oo wayn kaas oo soo bilaamay markii R/wasaare Cumar oo lagu tirinayay in damjadiid uu kala shaqaynayo sidii kursiga Madaxtinimada dalka ay u sii haysan lahaayeen oo ka leexday kuna dhawaaqay Musharaxnimo isagoo bilaabay xulufaysi xoogan siyaasiyiinta xasan Shiikh sida wayn uga baqayo.
Cumar Cabdirashiid ayaa 5, September 2016 Muqdisho uga dhawaaqay inuu u taagan yahay Xilka Madaxwaynaha Soomaaliya kadib markii uu dadaalo badan kasameeyay dibadda, waxaana Damjadiid ay taas u aragtay hagar daamo la xariirta dadaa lkooda ay kursiga dalka ugu sareeya mar kale Xasan Shiikh la doonayaan.
Khilaafka hada soo baxay ee ka dhexeeya Damjadiid iyo Cumar C/rashiid ayaa noqon kara mid aan sahlaanayn, waxaana damjadiid ay ka dhaxli kartaa inxayndaabka Madaxtooyada Soomaaliya ay banaanka uga baxaan maadaama isgarabsi culus uu u bilaamay siyaasiyiinta Musharaxiinta ah iyo R/wasaare Cumar.
Khilaafka ayaa ayaa la dareemayay markii dawladda Soomaaliya Hay’adaheeda mid ka mid ah oo lagu tiriyo dhanka damjadiid ay amar ku bixisay in Madaxda aysan wariyayaasha soo dhawayn karin sidoo kalena uu soo baxay amar ahaa in banaan baxyo musharaxiintu aysan Muqdisho ku samayn karin.
Amaradaas soo baxay waxaa kabiyo diiday Ra’iisulwasaare Cumar oo sheegay in Musharaxiintu ay xaq u leeyihiin inay qabsadaan banaan baxyo aan la xadidi karina dhaqdhaqaaqooda Caasimada Muqdisho iyo Gobolada dalka.
Sidoo kale Gudiga Doorashada dadbadan ee heer Federaal ayaa shalay warsaxaafadeed kasoo baxay ku sheegay in Xildhibaanada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe lagu xulayo Muqdisho, waxaana taas ay u muuqatay garab xoogan oo xasan Shiikh heli karo, iyadoona arrinkaas uu kabiyo diiday R/wasaaraha Soomaaliya oo olalihiisa doorashada kawada Puntland.
Cumar ayaa sheegay in xulista Xildhibaanada ay go’aan ka gaarayaan Madaxda Dawladda Soomaaliya ugu saraysa.
Maxuu Yahay Sawirka Muuqda?
Sawirka guud ee Doorashada Soomaaliya ka muuqda ayaa ah hada Shiikh Shariif Shiikh Axmed Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya oo wada dadaal badan , waxaana hada aad isugu soo dhawaaday Musharax Shiikh Shariif iyo Cumar Cabdirashiid.
Isgarabsi kale ayaa jira oo ku aadan dhanka siyaasiyiinta Madaxwaynaha u taagan kuwaas oo leh xariiro hoose iyo kuwa dadku ogyihiin.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa dadaal ugu jira sidii uu mar kale xilka Madaxwaynaha ugu soo noqon lahaa.